Bonde roripwa nechibage apo nzara yoruma - The Zimbabwean
Bonde roripwa nechibage apo nzara yoruma
Pfambi nemamwewo madzimai akaomerwa kumatunhu akadzikira nekuoma kuChikombedzi; Chiredzi vanonzi vari kupa bonde voripwa nechibage senzira yekupedza nzara.
Mumwe murume anotenga bonde akataura nebepanhau rino anoti akatengesa nzimbe kuChiredzi ndokutenga chibage chekuzotengesa kuChikombedzi, asi paakanzwa kuti pfambi idzi dzaitambira chibage, haana kunonoka kuvapa.
“Ndakanga ndisina mari panguva iyoyo sezvo vandinotengesera vachiwanzondibhadhara kwapera mazuva. Ndakafara kupa mumwe wepfambi idzi tsapo inorema upamhi hushanu semuripo wekuita bonde neni kwenguva pfupi,” akadaro.
Mumwewo murume anofarira zvemabasa ehusiku, anoshanda semugayisi akati anoba chibage chemuridzi wechigayo panguva dzaanenge achinzwa kuda kuita zvebonde.
Muvagari vemuChikombedzi vanenge ini, zvinonetsa kuunganidza mari. Patinenge tawana chibage tinochichenge-tedza kuitira kuzopa pfambi,” akadaro.
Mukushanya kwakaita mutori wenhau webepanhau reZimbabwean kuChikombedzi, zvakabuda kuti pfambi dzeko dziri kuripwa netsapo yechibage chinorema upamhi hushanu chete, sezvo nzara yarura munzvimbo yeChiredzi zvichitevera kushomeka kwemvura yakanaya mwaka wapfuura.
“Tiri kuita izvi zvichitevera kushomeka kwechibage munharaunda nemuzvitoro. Vanotenga mabasa edu vari kuratidza kupererwa nemari zvekare nezvikonzero zvakasiyana siyana nekuda kwekushomeka kwemvura yemuchadenga,” akadaro Shalati Baloyi, pfambi yenzvimbo yemabhizimusi paChikombedzi.
Tsvakurudzo yakaitwa neboka rehurumende rinoongorora mamiriro emagariro evanhu mune zveupfumi nekuburitsa vangada rubatsiro rakaburitswa kutanga kwegore rino rakamhan’ara kuti Masvingo ndeimwe yenzvimbo dzisina kunaya mvura zvakanaka mwaka wapfuura zvakasiya chiuru chezvuru chimwechete neina yavanhu vachida rubatsiro rwezvekudya.
Vamwe vagari venzvimbo iyi vanonzi vari kuroodza vanasikana vavo vachiripwa nechibage nezvipfuyo. Mari iri kushomeka , vazhinji vari kupana zvinhu kana zvipfuyo semiripo. Barika rinonzi rakadzika midzi munzvimbo iyi, vazhinji vemadzimai akaparikwa vachiri mhandara dzichangoyaruka.
Mhuri dzinonzi dzinenge dziine vana gumi uye madzimai matatu. Vagari venzvimbo iyi vanoti havasi kuwana rubatsiro rwakakwana kubva kuhurumende kana kubva kune vemasangano akazvimiririra. Mudzviti wenzvimbo iyi vaFelix Chikovo vanonzi vakaudza vatapi venhau kuti hurumende yakavimbisa rubatsiro rwemahara rwechibage chinorema zviuru gumi nenomwe kune vose vakatarisana nenzara, asi vazhinji vari kutya kuti, semakore ose, vatsigiri veZanu (PF) ndivo vachawana rubatsiro urwu.